Liverpool oo aqbashay heshiis ay Madrid kaga saxiixanayso Mateo Kovacic. | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Liverpool oo aqbashay heshiis ay Madrid kaga saxiixanayso Mateo Kovacic.
Liverpool oo aqbashay heshiis ay Madrid kaga saxiixanayso Mateo Kovacic.
Muqdisho – Liverpool ayay wararku sheegayaan in ay heshiis la meel-dhigatay xiddiga kooxda Real Madrid ee Mateo Kovacic oo kamid ah ciyaartoydii ku guuleystay horyaalka iyo koobka horyaallada Yurub sanadkii lasoo dhaafay.
Jurgen Klopp ayaa horay ula soo saxiixday xiddigaha Mohamed Salah, Dominic Solanke iyo Andrew Robertson wuxuuna doonayaa in uu helo adeegga qadka dhexe ee Mateo Kovacic.
Xiddiga kooxda RB Leipzig star ee Naby Keita iyo difaaca kooxda Southampton, Virgil van Dijk ayaa ah xiisaha ugu sarreeya ee kooxda marka loo fiiriyo suuqa kala iibsiga ee hadda furan, hayeeshe Reds wali kuma aysan guuleysan in ay hesho xiddigo ka badan Mohamed Salah, Dominic Solanke iyo Andrew Robertson.
Diario Gol oo kasoo baxda Spain ayaa warineysa in Kovacic uu heshiis la gaaray kooxda Liverpool isla markaana uu u guuri doono Anfield iyo gobolka Merseyside-ka.
Qadkan dhexe ayaa kamid ah ciyaartoyda keydka ee macalin Zinedine Zidane, 19 soo bilaabasho oo kaliya ayuu sameeyay horyaalka La Liga xagaagii dhamaaday wuxuuna baddal kusoo galay sideed kale.
Croatian-kan heerka caalami ayaa kusoo biiray kooxda isaga oo kamid ah naadiga Inter Milan sanadki 2015, wuxuu u dhaliyay Real hal gool sidaas oo kale waxa uu caawiyay 3 kale sanadkii dhamaaday ee 2016-17.
Next: Koontada Barca oo la dhacay laguna qoray inay la saxiixatay Di Maria.